को हुन् अफगानिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री मुल्लाह अखुन्द ? - मधेश लाइभ
गृह पृष्ठ » विश्व » को हुन् अफगानिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री मुल्लाह अखुन्द ?
२०७८ भाद्र २३ गते १४:१७ मा प्रकाशित
काबुल, २३ भदौ । काबुल कब्जा गरेको तीन सातापछि तालिवानले मुल्लाह मोहमद हसन अखुन्दलाई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि तालिवान समूहभित्र उनी को हुन भन्ने बारेमा चासो बढेको छ ।
संसदको आठौँ अधिवेशन २० घन्टा [...] Next